Westminster International College မှ အင်္ဂလန် MBA ဘွဲ့ ကိုတက်ရောက်သင်ကြားနေတဲ့ကျောင်းသူ ခိုင်သဇင်မြင့် | Blog - Knowledge, Career, Family
Westminster International College မှ အင်္ဂလန် MBA ဘွဲ့ ကိုတက်ရောက်သင်ကြားနေတဲ့ကျောင်းသူ ခိုင်သဇင်မြင့်
“သမာသမတ်ကျပြီး အောင်မြင်တဲ့စီးပွားရေး လုပ်ငန်းရှင်ဖြစ်ချင်တယ်။ လူငယ်တွေ အားလုံးကို အခွင့်အရေးရအောင် တစ်ဖက်တစ်လမ်းကနေ ဖြည့်စည်းပေးချင်တယ်ဆိုတဲ့ Westminster International College မှ အင်္ဂလန် MBA ဘွဲ့ ကိုတက်ရောက်သင်ကြားနေတဲ့ကျောင်းသူ ခိုင်သဇင်မြင့်၏ Interview”
၁။ အမည်၊ အသက်၊ နေရပ်လိပ်စာ၊၊
Khine Thazin Myint၊ အသက် 30၊ နေရပ်လိပ်စာ 184, Bo Sun Pat St, Pabeden Ts, Yangon.
၃။ ယခုလက်ရှိတက်ရောက်နေတဲ့ကျောင်းအမည်၊ ဘာသာရပ်။
Malaysia နိုင်ငံမှာဖွင့်လှစ်ထားတဲ့ Westminster International College မှာအင်္ဂလန်နိုင်ငံက (Cardiff Metropolitan University)ရဲ့ MBA ဘွဲ့ ကိုတက်ရောက်သင်ယူနေပါတယ်။
၄။ မြန်မာနိုင်ငံမှာ Computer နဲ့ ကျောင်းပြီးခဲ့ပေမဲ့ ဘာကြောင့် MBA ကိုတက်ရောက်ဖို့ရွေးချယ်ခဲ့တာလဲ။
အောင်မြင်တဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်ဖြစ်ဖို့ က ညီမရဲ့ ငယ်ငယ်ထဲကအိပ်မက်ပါ။ Technology and Innovation ပိုင်းကိုစိတ်အားထက်သန်ခဲ့တာကြောင့် Bachelor တန်းမှာ Computer Engineering ကိုတက်ရောက်ခဲ့တာပါ။. Information Technology ပေါ်မှာအဓိကထားပြီး စီးပွားရေးလုပ်သွားချင်ပါတယ်။ နိုင်ငံတကာကိုထိုးဖောက်ပြီး အောင်မြင်တဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်ဖြစ်ဖို့ က အခုခေတ်အနေအထား အရပညာရေးအတွေ့ အကြုံကိုလုံလုံ လောက်လောက် ရှိထားဖို့ လိုအပ်တယ်။ ကောင်းမွန်တဲ့ပညာရေးနဲ့အတွေ့ အကြုံကောင်းတွေ ယူမယ်ဆိုရင် နိုင်ငံခြားမှာသွားပြီး သင်ယူလေ့လာတာကပိုကောင်းပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံမှာညီမ ဘွဲ့ ကတဆင့်ရခဲ့တဲ့ အသိပညာတွေကလည်း IT ပိုင်းမှာအသုံးဝင်လိမ့်မယ်လို့ ထင်ပါတယ်။ ညီမရဲ့ Company Skill တွေနဲ့ IT ကုမ္ပဏီမှာစတင်ပြီးတော့ အင်္ဂလန် MBA ဘွဲ့ မှာသင်ယူရရှိခဲ့တဲ့ Business ပိုင်းနဲ့ ပိုအောင်မြင်အောင် လုပ်သွားမှာပါ။ ဒီနေ့ ခေတ်ကာလမှာ Business လုပ်မယ်ဆိုရင် အရင်တုန်းကလိုမျိုးမလွယ်ကူတော့ဘူး။ အဖွဲ့ အစည်းတွေအားလုံးက Highly Professionally ပုံစံနဲ့Run နေကြပြီ။ ဒီအဖွဲ့ အစည်းတွေနေရာမှာ ၀င်ရောက်ထိုးဖောက်ဖို့ အတွက် နိုင်ငံတကာအတွေ့ အကြုံကို ရယူပြီးနိုင်ငံခြားမှာ Master Degree In Business Administration ဘွဲ့ ကိုလိုချင်ခဲ့တာပါ။
၅။ Westminster (Cardiff Metropolitan University) ကိုရွေးချယ်ရတဲ့အကြောင်းအရင်း။
မလေးရှား နိုင်ငံနဲ့ မြန်မာနိုင်ငံက နီးနီးလေးနှစ်နာရီကျော်လောက်ဘဲ လေယာဉ်စီးရတဲ့အတွက် မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ မဝေးဘူး။ သမီးအကြီးဆုံးဖြစ်နေတော့ အရေးအကြောင်းကိုယ့်မိသားစုက ကိုယ့်ကိုလိုအပ် တယ်ဆိုရင် အချိန်မှီပြန်လို့ ရတယ်။ ကျောင်းလခကသိန်း (70)ကျော်ဘဲကုန်ပြီး အရစ်ကျခွဲသွင်းလို့ ရတယ်။ ညီမလိုချင်တဲ့ အင်္ဂလန် MBA ကို Ranking ကောင်းတဲ့ (Cardiff Metropolitan University) ကရမယ်။ မြန်မာနိုင်ငံမှာ MBA တက်ရင်သိန်း (120)လောက်ကုန်မယ်လို့ သိထားတယ်။ နေထိုင်စားသောက်စရိတ်နဲ့ကျောင်းလခစုစုပေါင်းမှ သိန်း(100) လောက်ဘဲကုန်ပြီး နိုင်ငံခြားမှာသွားသင်လို့ ရတဲ့ Westminster College ကိုဘဲရွေးချယ်လိုက်တာပါ။
၆။ ကျောင်းတက်နေရင်း Part-Time job လုပ်ခွင့်ပေးလား။ ညီမရောကျောင်းတက်နေရင်း အလုပ်လုပ်နေလား။
Malaysia Immigration Department က Full time ဖြစ်ဖြစ် Part Time ဖြစ်ဖြစ်အလုပ်လုပ်ခွင့်မပြု ထားပါဘူး။ ဒါပေမဲ့ Malaysia နိုင်ငံကအလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်းများတဲ့နိုင်ငံပါ။ အိမ်မှာ Online သုံးရင်းနဲ့ပိုက်ဆံရှာဖို့အခွင့်အလမ်းများပါတယ်။ Event Management Company တွေကလည်း သူတို့ ရဲ့ special events တွေမှာကျောင်းသားတွေပါဝင်စေတယ်။ ကျောင်းပြီးတာနဲ့ ချက်ချင်း အလုပ်လုပ်လို့ ရအောင် ကျောင်းတက်နေစဉ်ထဲက အလုပ်လျှောက်ထားလို့ ရတယ်။ ညီမက international ကျောင်းသားတွေကို ဂရုစိုက်ပြီးလိုအပ်တာတွေ ကူညီတဲ့အတွက် ညီမတို့ College ရဲ့ Student Representative ဖြစ်လာခဲ့တယ်။ အခု Westminster College က Administration Department အတွက် ညီမကိုအလုပ်ကမ်းလှမ်းလာတယ်။
၇။ Westminster မှာ MBA မတက်ခင် ဘယ်လိုတွေကြိုတင်ပြင်ဆင်ခဲ့လဲ။
Malaysia နိုင်ငံရဲ့ ပညာရေးက Asia မှာဆိုရင်အချက်အချာ အကျဆုံးနိုင်ငံပါ။ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ ယခုလက်ရှိ ပညာရေးနဲ့ လုံးဝကို ကွာခြားပါတယ်။ သင်ကြားရေးပိုင်းက UK ပုံစံထပ်တူကျပြီးသွားတာဆိုတော့ language ပိုင်းမှာ စိန်ခေါ်မှုတစ်ခုဖြစ်လိမ့်မယ်လို့သိထားတဲ့အတွက် IELTS ကိုမြန်မာနိုင်ငံမှာကြိုတင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါတယ်။ IELTS Band 5.5 ဖြေဆိုခဲ့တာမရှိထားရင်လည်း4Skills အခြေခံပိုင်နိုင်ထားတဲ့လူတွေအတွက် Westminster College က advanced English learning course ကို Provide လုပ်ထားပါတယ်။ အင်္ဂလိပ်စာအခြေခံရှိပြီး MBA ကိုတိုက်ရိုက်တက်ချင်တယ်ဆိုရင် Westminster မှာ Entrance စာမေးပွဲ ရှိပါတယ်။ (3) လတက်ရောက်ရတယ်။
၈။ Westminster မှာဘွဲ့ ရကျောင်းသားတစ်ဦးအနေနဲ့ ကျောင်းပြီးတဲ့အခါ ဘယ်လိုအလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်းတွေ ဘယ်လိုရှိလဲ။
အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်း တစ်ခုထဲအတွက်ဘဲ MBA ကိုတက်ခဲ့တာမဟုတ်ပါဘူး။ ညီမရဲ့Career Goal ကအနာဂတ်မှာ အောင်မြင်တဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင် တစ်ဦးဖြစ်ဖို့ ပါ။ ဒီ Level ကိုရောက်ဖို့ အတွက်ကလည်း skills တွေတက်လာ အောင် အတွေအကြုံသက်တမ်းလိုအပ်တယ်။ Malaysia နိုင်ငံက organizations တစ်ခုကို Join ဖို့စီစဉ်ထားတယ်။ ကံအားလျော်စွာနဲ့ ဘဲ ညီမ MBA တက်ခဲ့တဲ့ Westminster ကျောင်းကဘဲညီမကို အလုပ်လုပ်ဖို့ ကမ်းလှမ်းလာတယ်။ Westminster International College မှာ MBA တက်ခြင်းအားဖြင့် Company တွေမှာဘဲဖြစ်ဖြစ် ၊ကိုယ်ပိုင်စီးပွားရေးလုပ်တာဘဲ ဖြစ်ဖြစ် အဆင်ပြေပါတယ်။ ဒါကြောင့်ညီမယုံကြည်တာက Westminster ရဲ့ MBA ကနိုင်ငံခြားသားဖြစ်တဲ့ ညီမတို့ လိုမြန်မာကျောင်းသား တွေကို Big Industry ထဲကိုအရောက်ပို့ ပေးလိုက်သလိုပါဘဲ။ မလေးရှားနိုင်ငံအပါအ၀င် တခြားနိုင်ငံတွေမှာပါ အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်းအားသာတယ်။ ကိုယ်ရဲ့ ကိုယ်ပိုင်စီးပွားရေးကိုလည်း တည်ထောင်လို့ ရအောင် သင်ကြားပေးတယ်။ မလေးရှားနိုင်ငံရဲ့ စီးပွားရေးကတည်ငြိမ်တယ်။ Grow up လည်းဖြစ်တော့ အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်းတွေက အရင်ကထက်ပိုကောင်းပါတယ်။
၉။ သာမာန်ကျောင်းသားတစ်ယောက်အနေနဲ့စာလိုက်နိုင်ဖို့ ဘယ်လိုလေ့လာသင်ယူသင့်လဲ။
Westminster International college မှာသင်တဲ့ဆရာတွေက Highly Professional ဖြစ်တယ်။ အရည်အချင်း အရည်အသွေးနဲ့ ပြည့်ဝတယ်။ ဒါကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံ ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူတွေကို ညီမလေးလေးနက်နက် ပြောချင်တာက အတန်းချိန်မလွတ်ပါစေနဲ့ နာရီစက္ကန့် နဲ့ အချိန်တိုင်းဟာ ညီမတို့ အတွက် အရမ်းတန်းဖိုး ရှိပါတယ်။ Westminster ရဲ့ MBA Program က Assignment 100% ဖြစ်တဲ့အတွက်ဗဟုသုတတွေအများကြီး ရပြီး Company တွေနဲ့ စက်မှုလုပ်ငန်းတွေမှာ အလုပ်လုပ်မယ်ဆိုရင် အများကြီးအထောက်အကူပြုတယ်။ Professor တွေကရင်းနှီးဖော်ရွေတယ်။ နွေးထွေးတယ်။ အချိ်န်မရွေး Discussed လုပ်လို့ ရတယ်။ ကျောင်းသား၊သူတွေအတွက် Officer တွေကအမြဲတမ်း အဆင့်သင့်ဖြစ်နေတယ်။ 3rd semester မှာတော့ Major Project ကို Particular Topic နဲ့ Particular Industry မှာလုပ်ရတယ်။ ဒီ Project ကညီမတို့ ရဲ့အတွေးအခေါ်တွေ၊ အတွေ့ အကြုံတွေနဲ့ ကိုယ့်ရဲ့ Life တစ်ခုလုံးကိုပြောင်းလဲသွားစေတယ်။ ဒီ Project တွေကို အောင်အောင်မြင်မြင်နဲ့ ပြီးဖို့Lecture တွေကလည်း Full Support ပေးတယ်။
၁၀။ နိုင်ငံခြားမှာပညာသင်ချင်တဲ့ကျောင်းသူ၊သားတွေ အတွက်အကြံပြုချက်။
မလေးရှားမှာရှိတဲ့ Westminster College ကကုန်ကျစရိတ်အသက်အသာဆုံးနဲ့အချိန်တိုအတောအတွင်းမှာ UK Quality ကောင်းကောင်းကို အင်္ဂလန် MBA Program အတွက်သင်ကြားပေးနေပါတယ်။ Westminster မှာ Malaysia, China, Japan, South Korea, Russia, India, US, UK, Middle East မှကျောင်းသားတွေ သင်ကြားနေပါ တယ်။ ဒီလိုနိုင်ငံပေါင်းစုံက ကျောင်းသားတွေလာ သင်ကြားတဲ့အတွက် ကိုယ့်ရဲ့personality and exposure ကပြောင်းလဲသွားတယ်။Business Network, Job network အတွက်လည်းအများကြီး အထောက်အကူပြုတယ်။ UK Quality အဆင့်မြင့်ပညာရေးကို ကုန်ကျစရိတ်နဲ့ နေထိုင်စားသောက်စရိတ် အပြီးအစီးသိန်း(100) ကျော်ဘဲကုန်ပြီး Cardiff Metropolitan University ရဲ့ MBA ဘွဲ့ ကိုရမှာပါ။ Westminster ရဲ့ ထူးခြားချက်က နောက်ဆုံး semester ဖြစ်တဲ့ 3rd Semester မှာ အင်္ဂလန်နိုင်ငံရဲ့ UK Campus ကိုသိန်း(70)ကျော်အပြင် ထပ်ပေးစရာမလိုဘဲနဲ့မည်သူမဆိုအားလုံး သွားတက် နိုင်တယ်။ ဒီလို A Big Change က UK နိုင်ငံမှာကျောင်းပြီးသွားတဲ့အခါ အခြေချချင်တဲ့သူတွေအတွက် အသုံးဝင်လိမ့်မယ်။
၁၁။ ခိုင်သဇင်မြင့်ရဲ့ အနာဂတ်ရည်မှန်းချက်။
ညီမရဲ့ ရည်မှန်းချက်က သမာသမတ်ကျပြီး အောင်မြင်တဲ့စီးပွားရေး လုပ်ငန်းရှင်ဖြစ်ချင်တာပါ။ တစ်ဖက်မှာလည်း အောင်မြင်တဲ့ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်ဖြစ်ဖို့ ကြိုးစားရင်း၊ တစ်ဖက်မှာလည်း ညီမတို့ လို လူငယ်တွေ အားလုံးကို အခွင့်အရေးရအောင် တစ်ဖက်တစ်လမ်းကနေ ဖြည့်စည်းပေးချင်တာကလည်း ညီမရဲ့အိပ်မက်ပါ။ I want to prove Purpose of my life was not just live and die as normal!